सिरुवा (जुर सितल) पर्व : नेपालको झापा,मोरङदेखि कम्बोडियासम्म पर्वको उत्सव! - Malayakhabar
होम पेज देश समाचार सिरुवा (जुर सितल) पर्व : नेपालको झापा,मोरङदेखि कम्बोडियासम्म पर्वको उत्सव!
सिरुवा (जुर सितल) पर्व : नेपालको झापा,मोरङदेखि कम्बोडियासम्म पर्वको उत्सव!
काठमाडौं := पश्चिममा सप्तरीदेखि पूर्वमा पश्चिम बंगलको कुचविहारसम्म मनाइने सिरुवा (जुर सितल) पर्व बिहीबार पनि मनाइँदैछ । सामान्यतया ३ दिनसम्म मनाइने यो पर्व पहिलो दिन पानीको साथमा, दोस्रो दिन हिलोको साथमा र तेस्रो दिन रंगको साथमा मनाउने गरिन्छ।
जानकारहरु यो पर्व कम्बोडिया, थाइल्याण्ड जस्ता मुलुकसम्म मनाउने गरिन्छ । यद्यपि नेपाल र भारतबाहिर यसको नाम पनि फरक छ । कम्बोडियामा अप्रिल १३ र १४ गते चोलछाम (कसैले चोङक्रान पर्व पनि भन्छन्) पर्व मनाउने मूलभूत शैली नेपाल र कम्बोडियासम्म उस्तै हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन्। कम्बोडियाली सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार चोलछाम पर्व रंगहरुको साथमा मनाउने गरिन्छ ।
सिरुवा संस्कृतिका जानकार सप्तरी स्थायी निवासी सीएन थारुका अनुसार पश्चिममा सिम्रौनगढदेखि पूर्वमा झापासम्म, भारतको कुचविहारदेखि कम्बोडियासम्म मनाइने यो पर्वको नाम ठाउँ अनुसार फरक फरक रहेको बताउँछन् । सप्तरी पूर्वको सिरुवा पर्व सप्तरीको पश्चिमी भेगमा भने जुडशिलतको रुपमा मनाउँछन् । सप्तरीदेखि पूर्व पश्चिम बंगालको कुचविहारसम्म त्यसलाई सिरुवा पर्वको नामबाट चिनिन्छ । वीरगञ्जदेखि पश्चिमतिर यो पर्व मनाउने चलन छैन।
कम्बोडियाको चोलछामको किंवदन्ती :
राजकुमार उक्त प्रश्नको उत्तरको खोजीमा निस्किए । छैठौं दिन बेलुकासम्म पनि उनले उक्त उत्तर नभेटेपछि राजकुमार एउटा रुखको फेदमा आफ्नो मृत्युको समय कुरेर बसेका हुन्छन् । राजकुमार विविध जनावरको भाषा बुझ्ने क्षमताका व्यक्ति थिए । उनी बसेको रुखको माथि चिलको गुँड थियो र त्यहाँ चिलले आफ्ना बच्चहरुलाई यो मान्छे भोलि मर्ने भन्दै भोलिको राम्रो आहारा मिलेको सुनाउँदै थियो । बच्चाहरुले उसको कारण सोधे। चिलले दरबारमा सोधेको प्रश्न र उत्तर दिन नसकेको प्रसंग आफ्नो बच्चालाई सुनाउँछ । बच्चाहरुले आमासँग त्यो प्रश्नको उत्तर सोध्छन् । बच्चालाई चिलले उक्त प्रश्नको उत्तर भन्छे । त्यो रुखमुनि बसिरहेका राजकुमारले सुन्छन् । चिलले सुनाए अनुसार भाग्यले बिहान अनुहारमा निवास गर्छ, दिउँसो शरीरभित्र निवास गर्छ र राति खुट्टा निवास गर्छ भनेर उत्तर दिए । उत्तर दरबारमा सुनाएपछि राजकुमारसँग बिहे गर्न राजकुमारी तयार हुन्छिन् ।
राजधामी विभिन्न जातिको हुने गर्छ । कतिपय ठाउँमा एउटा वंशबाट पनि आएको हुन्छ । उनीहरुले पहिलो पूजा गरेपछि मात्रै अरुले त्यहाँ गएर पूजा गर्ने चलन सप्तरीमा छ । सुनसरीदेखि गाउँहरुको हरेक साझा थानमा मेलालाग्ने गर्छ । विशेषगरी ३ दिनसम्म मात्रै यो पर्व मनाउने गरिएको भए पनि ठाउँ एक महिनासम्म पनि यो पूजा लम्बिन सक्छ । यो पर्वको पहिलो दिन पानीबाट खेल्ने, दोस्रो दिन हिलोले र तेस्रो दिनमा रंगले मनाउने गर्छन् । #अनलाईन खबर
अघिल्लो लेख कोरोनाको बावजुद पनि ८ महिनामा ६ खर्ब १४ अर्ब बराबरको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्रियो।
पछिल्लो लेख लोकपर्व सिरुवा (जुर सितल) मनाइँदै।